Izany no nahatonga ny rafitra miady amin`ny kolikoly sy famotsiam-bola napetraka tamin`ny taona 2004 sy 2005, izany hoe efa ela no tokony hapetraka ireny zavatra ireny. Ity lalàna farany ity no ahafahana mameno ny rafitra rehetra. Hitantsika fa ny fitsarana misahana ny ady amin`ny kolikoly na “Chaine penale anti-corruption” dia efa niova “pole anti-corruption » ary efa mipetraka daholo ny rafitra vaovao. Efa tafapetraka ny eto Antananarivo ary mametraka ny any Toamasina sy any amin`ny renivohi-paritany ao aoriana ao. Araka izany, io lalàna io sisa no tsy mahafeno an`ilay fepetra takian`ilay fifanarahana iraisam-pirenena. Antony mantsy, rehefa hita fa misy kolikoly natao na nisy famotsiam-bola natao dia io lalàna io ihany no ahafahan`ny fanjakana malagasy mitazona, manageja ary mamerina ilay tombontsoa azo tamin`ny alalan`ny kolikoly na famotsiam-bola. Efa tamin`ny taon-dasa no napetraka teo anivon`ny antenimieram-pirenena ilay volavolan-dalàna fa tsy nodinihana mihitsy. Misy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena fa misy koa ny tombontsoa ambonin`ny firenena: na mandeha ny fandinihana ny volavolan-dalàna, afaka hahitsy ireo solombavambahoaka ihany ny andininy izay heverina mihoatra tokony ho izy na tsy manaja ny fahafahana sy fahalalana ary ny zon`ny olombelona ao anatin`ny fandaniana ilay lalàna ka tokony haroso ihany amin`ny fivoriana ara-potoana faharoa amin`ny herinandro ambony. Ankoatra izay, tokony hodinihana ihany koa ny hahatomombana ara-dalàna tsara ny resaka fifidianana hatramin`ny fihodinana faharoa. Tsy latsa-danja ihany koa ny filaminam-bahoaka satria hitantsika fa betsaka ny fanararaotana na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra na any amin`ny faritra rehetra any mba hampisy izay tsy fikorontanana izay manoloana ny fanatanterahana izay fifidianana izay. Tsy hay adinoina ihany koa ny sosialim-bahoaka satria ny vidim-piainana, ny vidin`ireo akora fampiasa amin`ny andavanandro, na ny solika… miakatra foana dia tokony hodinihana. Antenaina fa tsy ho variana amin`ny fampielezan-kevitra ny depiote na dia manomana ny fifidianana filoham-pirenena i Madagasikara fa mba hanao vaindohan-draharaha ny fiainam-pirenena ihany koa.